Dani Carvajal Oo Sheegay Hadal Ka Cadhaysiin Kara, Solari, Zidane iyo Madaxweyne Perez – Cadalool.com
Dani Carvajal Oo Sheegay Hadal Ka Cadhaysiin Kara, Solari, Zidane iyo Madaxweyne Perez
Difaaca midig ee Real Madrid, Dani Carvajal ayaa amaan xadka ka baxsan ku sagootiyey tababarihii shaqada laga caydhiyey ee Julen Lopetegui oo natiijadii ugu xumayd ee Real Madrid soo marta taariikhda dhow ku hoggaamiyey.
Lopetegui oo si xun kaga baxay xulka qaranka Spain markii maalin ka hor bilowgii Koobka Adduunka shaqada laga caydhiyey sabab la xidhiidha in markaas uun loo magacaabay tababaraha Real Madrid, ayaa muddo saddex bilood gudahood ay Los Blancos ka eriday shaqadii ay siisay.
Warbixintii ay Real Madrid kasoo saartay markii la caydhinayey ayaa waxay ku sheegtay in waxqabadkiisa iyo natiijadiisu aanay is lahayn, sidaas daraadeedna isbeddel lama huraan yahay.
Ciyaartooyada ayaa qaarkood amaan ku sagootiyeen markii la caydhiyey, laakiin difaacyahanka Dani Carvajal ayaa si waalli ah ugu tilmaamay tababarihii ugu wanaagsanaa oo xattaaa uu ka sarraysiiyey Zinedine Zidane oo saddex sannadood oo ay wada joogeen u qaaday koobab badan, kana dhigay mid ka mid ah difaacyahannada dunida ugu wanaagsa.
Carvajal oo u warramay TVE ayaa waxa uu Lopetegui ku sifeeyey macallinkii ugu wanaagsanaa ee abid uu ka hoos ciyaaro, waxaanu nasiib darro ku tilmaamay in shaqada laga caydhiyey.
“Aniga ahan, waa tababarihii ugu wanaagsanaa ee aan arkay, nasiib darro sare, nasiibkii loo baahnaa ayaa uu waayey si uu noola sii shaqeeyo.” Sidaas ayuu yidhi Carvajal.
Difaacan dhaawaca kaga maqan Los Blancos, waxa uu tilmaamay in Lopetegui ay isku aragti ka ahaayeen arrimo badan, waxaanu yidhi: “Waxa aanu wadaagnay sida uu u arko kubadda cagta, sida uu kooxda u maamulo iyo sida uu ciyaartooyada ula dhaqmo. Ka hor intii aanu Real Madrid imanin ayaan hore u sheegay arrintan, haddana waan ku celinayaa isagoo tegay, waanan sheegi doonaa illaa inta aan arkayo tababare shaqada u qabta sidiisa si ka wanaagsan.”
Carvajal ayaa awood u yeeshay inuu ciyaaro siddeed kulan oo kaliya intii uu Lopetegui tababaraha ahaa, waxaana uu dhaawac ku seegay ciyaaro dhawr ah.